Tanteraka soa aman-tsara ny fandidiana ny mpitandrina – FJKM Ambavahadimitafo Tanteraka soa aman-tsara ny fandidiana ny mpitandrina |
Tanteraka soa aman-tsara ny fandidiana ny mpitandrina
Ny fahasalaman’ny mpitandrina Rakotoharintsifa Andrianjatovo
Ry hava-malala ao amin’ny Tompo, dia misaotra an’Andriamanitra lehibe isika fa tanteraka soa aman-tsara ny fandidiana ny Raiamandreny Mpitandrina tamin’ny Talata 13 Oktobra 2009 lasa teo.
Ny zavatra natao tamin’izany, dia araka ny efa nohamafisina teto tamin’ny Alahady 11 Oktobra 2009, dia ny fanaovana ny familiana ny lalan’ny « bile » na hoe ny « vésicule biliaire » no nanaovana ny atao hoe « dérivation ». Ka izy io izany dia avy any amin’ny aty mankany amin’ny tsinay. Ary rehefa nosokafana ny fandidiana dia hita fa nisy fivontosana teo amin’ny àty sy ny « pancreas »-n’ny Raiamandreny Mpitandrina, ka izay nangalana « prélèvement », natao « biopsie ». Ny valin’izy io izany dia andrasantsika eo amin’ny manodidididina ny faha-28 volana oktobra izao.
Ny zavatra izay ataontsika ankehitriny izany dia ny manatanteraka isan-kariva ilay votoatim-bavaka na ny « sujet de prière » mba ho fisaorana an’Andriamanitra, sy ho fitohizan’ny fitsaboana, indrindra indrindra fa ho an’ny Raiamandreny Mpitandrina sy ny Mpitsabo ary ny fanafody.
Ankehitriny ny fahasalaman’ny Raiamandreny Mpitandrina, noho izay fery, fandidiana kely sy fanjairana ny tsinay, dia tsy mbola mahazo misakafo izy mandritra ny herinandro. Ka noho izany dia mbola ao anatin’ny faharerahana izy. Efa noezahina ihany koa ankehitriny ny mampitsangana azy, ka isaky ny vao mitsangana izy dia mazava ho azy fa mbola reraka.
Dia izay no mbola iangaviana antsika, na amin’io herinandro manaraka io izany, ny mbola tsy hampisy ny famangiana ihany koa aloha fa mbola reraka izy. Ary aorian’izay dia mbola holazaina eto ihany rehefa afaka manao ny fitsidihana isika.
Fotoam-pivavahana eto am-piangonana isaky ny Alarobia karakarain’ny Vaomieran’ny Aim-panahy
Manarakaraka izany, ny mikasika ny fitsaboana ny Raiamandreny Mpitandrina, ny Vaomieran’ny Aim-panahy dia nanapa-kevitra fa ny fiaraha-miaina, ny fiangonana, ny fianakaviana, ary ny mpiara-monina eto amin’ny faritra Ambavahadimitafo, dia tsy atao ao amin’ny Akany ny fotoam-pivavahana, isaky ny Alarobia amin’ny 5:30 ka hatramin’ny 6:30, fa atao eto am-piangonana (FJKM Ambavahadimitafo), iarahantsika miara-miaina amin’ny fotoam-pivavahana, isaky ny Alarobia (5:30 – 6:30). Isika mianakavy rehetra dia ny fiangonana, ny fianakaviana , ary ny mpiara-monina eto Ambavahadimitafo.
Dia ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra.
Dr Mino Ralambomahay, Filohan’ny Loholona sy Diakona